Amai Pillay Vanoyambira VaMugabe Kusamhanyira Kuita Sarudzo
Nhumwa yeUnited Nations yanga iri munyika ichiongorora mamiriro akaita nyaya dzekodzero dzevanhu, Amai Navi Pillay, vakurudzira mutungamiri wenyika, VaRobert Mugabe, kuti vambomira kuita sarudzo munyika kudzamara pagadziriswa zvose zvine chekuita nesarudzo.
Amai Pillay vakurudzirawo kuti zvirango zvakatemerwa VaMugabe pamwe nevamwe vavo zvimbobviswa kusvikira sarudzo dzaitwa poonekwa kuti Zimbabwe iri kutevedza here mitemo yayo nekuremekedza kodzero dzevanhu. Vatiwo kutyorwa kwakaitwa kodzero dzevanhu munguva yeGukurahundi kuMatabeleland neMidlands, pamwe nemusarudzo dza 2008, kunofanirwa kuferefetwa, kwete kuti zvingosiiwa zvakadaro.
Vachitaura nevatori venhau muHarare neChishanu mushure mekupedza kushanya kwemazuva mashanu kwavanga vachiita munyika, vachiongorora nyaya dzekodzero dzevanhu, Amai Pillay vati kuita sarudzo idzi zvinhu izvi zvisina kugadziriswa, kuzvisikira moto muziso kunenge kuchiita nyika.
Kunyange hazvo mutungamiri weMDC, uye vari mutungamiri wehurumende, VaMorgan Tsvangirai, vachiti vanoda kuti vekunze vanoongorora mafambisirwo esarudzo vanofanira kuuya munyika mwedzi mitanhatu sarudzo dzisati dzaitwa vogara munyika kwemimwe mwedzi mitanhatu sarudzo idzi dzaitwa, Amai Pillay vati United Nations haisati yapihwa chikumbiro ichi neZimbabwe.
Amai Pillay vakurudzirawo kuti zvirango zvakatemerwa VaMugabe, nevamwe vavo vari muZanu PF, zvimbosendekwa parutivi kusvikira sarudzo dzaitwa.
Asi gurukota rezvemitemo, Va Patrick Chinamasa, avo vaita musangano nevatori venhau papedza Amai Pillay, vati Zimbabwe inyika yakazvimirira, nokudaro haifanirwi kuudzwa zvekuita. Vatiwo zvirango izvi zvinofanirwa kubviswa zvachose.
Amai Pillay vashorawo mapepanhau ehurumende pamwe neZBC nekuburitsa mashoko akarerekera kubato rimwe chete. Vakurudzirawo kuti nhepfenyuro dzakazvimirira dzipihwe marezenisi.
Asi boka rinopa marezenisi ekutepfenyura, reBroadcasting Authority of Zimbabwe, rinoti harikwanisi kupa marezenisi ekutepfenyura munyika yose nekuti haina masaisai akawanda. Boka iri rinoti rakapa makambani maviri marezenisi uye richapa marezenisi ekutepfenyura kumatunhu chete, kwete munyika yose.
Amai Pillay vatiwo vari kufara zvikuru kuti Zimbabwe yakaumba komisheni inoona nezvekodzero dzevanhu yeZimbabwe Human Rights Commission. Asi vati komisheni iyi haifanire kusweropedza nguva ichiongorora zvinhu zvakaitika karekare.
Zvisinei, Amai Pillay vati nyaya dzekupondwa kwakaitwa vanhu munguva yegukurahundi pamwe nemunguva yesarudzo dzakadzokororwa pakutsvaga mutungamiri wenyika dzakaitwa muna Chikumi 2008 hadzifanirwe kusiiwa dzakadaro vachiti mhosva dzakakura kudai hadzisi dzekufushira pasi pevhu.
Amai Pillay vatiwo United Nations iri pakati pekuzeya nyaya yekuti younza here chipangamazano chayo chinoona nezvenyaya dzekodzero dzevanhu munyika. Vatiwo kunyange hazvo vobuda munyika, vacharamba vachiongorora nyaya dzekodzero dzevanhu muZimbabwe.